Boliiska oo saxaafadda ku dhaleeceeyay been abuur - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Boliiska oo saxaafadda ku dhaleeceeyay been abuur
Masuuliyad nagama saarna inaannu beeninno
La daabacay torsdag 21 januari 2016 kl 14.14
Toddobaadkii ina dhaafay waxaa suuqa lagu baahiyey sawir ah iney dhallin-yaro ka soo jeedda dalka Afgaanistaan ee dalka keli-nimo ku yimid ka dambeeyeen anshax-xumadii ka dhacdey xafladdii We are Sthlm.
Hase yeeshee baaritaan ay amuurtaa ku sameeysay laanta idaacadda P3 uu ka soo baxay sawir kii hore beeninaya. Waana midda dhalisay in ciidanka ammaanku dhaleeceeyn dusha uga tuuraan saxaafadda.
P3, qaybteeda wararka ayaa dib u wada eegtay dacwooyinkii halkaasi laga gudbiyey intii ay xaflad-heesaadkaasi socotay ee kuleeylihii ina dhaafay. Iyadoona sagaal ka mid ah 18-kii dacwadood ee soo gaarey ciidanka ammaanka aananba la aqoonsaneyn cidda geeysatay. Waana tiro u dhiganta bar dacwooyinkaasi.
Hase yeeshee inta illaa hadda la og-yahey afar dacwooyinkaa tuhunka ah lala xiriirin karo dhallin-yaro ka soo jeedda Afgaanistaan.
Hase-yeeshee la hadal hayey guud ahaan in anshax-xumada xaflad heesaadkaa lala xiriiriyey dhallin-yaro Afgaanistaan ah.
Varg Gyllander, waa madaxa laanta saxaafadda ee ciidanka ammaanka magaalada Stockholm:
- Haddii dacwooyinka hoos loogu daadago waxaa la arkeyaa sawir ka duwan midka ay saxaafaddu butaacisay. Waxaa wax badan meel la jebiyey habkii baahinta wararka. Ciidanka ammaanku kama hadlo jinsiyadda cidda la tuhun-san yahay, middaasina oo ay ugu wacan tahay in aanay ahayn wax tayada xaqiiqda xaqiijinaya.
Miyaaney idin saaneyn masuuliyadda ah inaad beenisaan wararka noocaasi ah?
- Maya, masuuliyad nagama saarna inaannu beenino wararka ey saxaafadda reer Sweden qoraan. Howshaasi waa mid saxaafadda u taala.
Isha/ P3 Nyheter